‘किन राख्छन् महिला विवाहेत्तर सम्बन्ध ?’ « Media Club Nepal
४ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १४:३३
‘किन राख्छन् महिला विवाहेत्तर सम्बन्ध ?’
प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १४:३३
एजेन्सी । भनिन्छ जीवनमा एकपटकमात्रै विवाह गरिन्छ । विवाह गरेपछि वैवाहिक सम्बन्धलाई बचाउन र राम्रो बनाउन मै बढी जोड दिइन्छ । वैवाहिक सम्बन्ध यस्तो सम्बन्ध हो जुन संसारका हर कोहिका लागि जीवनभरीको साथ हो । जसमा विश्वास र माया भरिएको हुन्छ ।
विवाहपछि पुरुषको काँधमा जिम्मेवारीको बोझ थपिन्छ । श्रीमती र छोराछोरीको जिम्मेवारी उठाउने क्रममा पुरुषहरु श्रीमतीलाई वेवास्ता गर्न पुग्छन् । र जिम्मेवारी सँगसँगै रोमान्स र समय दुवैमा कमी आउँछ जसको कारण महिला अर्काे दोस्रो पुरुषसँग आकर्षित हुन्छन् ।
गुमनाम गायिका विष्णु माझी ‘सार्वजनिक हुँदै’
औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश निष्क्रिय, तर खरीद र प्रयोगमा ‘कानुनी बाधा छैन’
नेपालमा कोभिड संक्रमण दर ह्वातै घट्यो, आइतबार ८ प्रतिशतमा मात्र संक्रमण (हेर्नुहोस)
नेपालमा गाईजात्रा : इतिहासमा के छ ? कहाँ र कसरी मनाइन्छ ? (हेर्नुहोस् विस्तृतमा)
कोरोना भाइरसको ‘डेल्टा भेरिअन्ट’ विरुद्ध पनि कोभिड खोप उत्तिकै प्रभावकारी